Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 Maarso 2020	• 17 Comments
In kasta oo Robert Jensen u muuqdo inuu ka leexday xisbiyadii xisbiyada garabka midig dhawaanta, haddana weli wuxuu taageere weyn u yahay Trump. Fiidiyowyadiisa hadda si aad ah ayaa loo arkaa, waana sida xiddigii xiddigga cusub ee meeraha ku jira; haweeney rumeysan UFO iyo wareegyada dalaga: Janet Ossebaard. Hagaag taasi waa lafteeda […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 24 Maarso 2020	• 16 Comments
Markuu sannadka 2020 bilaabay waxaan dareemay inay noqonayso sanad adag. Markaad aragto dariiqii ugu dambeeyay ee xiridda coronavirus covid-19 oo xirxiran ayaa hadda rajo xoogaa leh ku dhammaan doonta. Sannadka cusub ee sannadka cusub ayaan qoray: “Inta aan ka walaacsanahay, 2020 waxay noqon doontaa sanadka kufsiga iyo isxilqaan […]
Dukumentiyada Coro-19 Janet Ossebaard (wareegyada dalagga, Ninefornews) documentary coronavirus (eeg hoos) waa dabin. Waa inaad la socotaa in IBM's Deep Blue supercomputer uu ka guuleystey horyaalkii adduunka Kasparov oo uu la shaqeeyay chess sanadkii 1996 iyo Google Alphabet's Kumbiyuutarka Kumbuyuutarka oo garaacay horyaalnimada adduunka ee ciyaarta ugu adag 2016. Intaa waxaa dheer, waa inaad la socotaa in […]
Intii lagu gudajiray barnaamijka 'Reddit' waxa aad dooneysid 'kalfadhiga, Bill Gates waxaa la weydiiyay su'aal ku saabsan cudurka' covidna-19 coronavirus '. Jawaabtiisu waa mid daaha ka qaaday. Wuxuu yidhi, "Ugu dambayntii, waxaan haysan doonnaa shahaadooyin dijital ah oo aan ku tusno cidda dhowaan la dayactiray ama la tijaabiyey iyo cidda qaadatay tallaalka." Shahaadooyinkaas dijitaalka ah, Bill wuxuu […]
Coronavirus-ka ayaa sida muuqata ku keenaya adkeyn weyn bulshada dhexdeeda. Waxaad ka arki kartaa taas dhammaan weerarada lagu qaado warbaahinta bulshada ee ku wajahan qof kasta oo ku dhiiriya inuu muujiyo fikrad ka duwan. Khalad ha sameyn. In kabadan 7 sano oo aan qorey, waxaan ogaadey in tirada askarta rayidka ah ee adeegsata rasaasta 'keyboard' ay kuqorto dadka warbaahinta bulshada […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 21 Maarso 2020	• 25 Comments
Waxaan sugi karnaa guud ahaan xiritaanka Nederland. Khudbadaha ay jeedinayaan Rutte iyo King Willem Alexander ayaa ah calaamadaha gidaarka waxayna badanaa u adeegayaan inay dadka ka farxiyaan oo ay aragti ka muujiyaan in wax walba hagaagi doonaan. "Waxaa laga yaabaa inay qaadato waqti dheer", sidaa darteed yeel […]
Waxyaabaha layaabka leh ee ku saabsan 'Coronavirus panic' ee Dr. Wolfgang Wodarg?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 19 Maarso 2020	• 6 Comments
Wolfgang Wodarg waa dhakhtar Jarmal ah iyo siyaasi u ah xisbiga SPD. Maaddaama uu yahay Gudoomiyaha Golaha Caafimaadka ee Golaha Caafimaadka Yurub, Wodarg wuxuu saxeexay qaraar la soo jeediyay 18-kii Diseembar, 2009, kaasoo si kooban looga dooday dood deg-deg ah bishii Janaayo 2010. Wuxuu sidoo kale ku baaqay baaritaan in lagu sameeyo saameynta sharci darada ah ee lagu sameeyay […]
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa i buux dhaafiyay su'aalo ku saabsan cudurka dillaaca coronavirus. Maxaan sameeyaa Sideen ula macaamilaa dhammaan cabirrada? Diyaar garow ayaan u sameeyaa wax walboo yimaada? Waxaan hayaa war wanaagsan. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ay cadahay in dad aad u badan ay fahansan yihiin in lagu ciyaarayo […]
Wasiirka Bijleveld wuxuu ciidanku diyaar u yahay "meela badan oo xabsi ah" iyo in la ilaaliyo kala dambeynta dhibaatada cudurka coronavirus, cusboonaysiinta: xirmada kaalmada tobanaan balaayiin
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 17 Maarso 2020	• 17 Comments
Wasiirka Ank Bijleveld ayaa hadda sheegay in wasaaradda gaashaandhigga (oo sanqadha ka wanaagsan 'ciidanka') ay diyaar u tahay inay dejiso meelaha soo dhaweynta, isbitaallada degdegga ah iyo meelaha karantiil dheeraad ah iyo in la ilaaliyo kala dambeynta. Khasab kuguma aha inaad iigu yeedho gardaro, maxaa yeelay waad tan saadaalin kartay tan, laakiin waxaas oo dhan way imanayaan aniga oo […]
«Boggii hore - Bogga xiga »
Guud ahaan Wadarta: 1.381.665